Isandi samaza, amanyathelo ukuya elunxwemeni. esandula ukwakhiwa, icocekile kakhulu, umgangatho ophantsi kunye nokufikelela kwinqanaba, ilungile
ukubaleka komntu omnye okanye isibini. Ukufikelela kwinqanaba, iveranda enkulu egqunyiweyo kunye neyadi ebiyelweyo. IAircon, igumbi lokuphumla elahlukileyo kunye nekhitshi.
Iveranda enkulu egqunyiweyo kunye
iyadi ebiyelweyo. Rente iyunithi ezimeleyo e-1 ye-BR ezantsi kwindawo eyodwa okanye izibini ezibalekayo, (okanye urente kwigumbi eliphezulu elizimeleyo le-2Br, okanye indlu yonke eyi-3BR)
I-Rules Beach ayonakaliswanga, inezindlu ezimalunga neshumi elinesibini kuphela. Indlu inempepho yolwandle, iimbono zamaza, izandi zokusefa, kunye neenkwenkwezi eziqaqambileyo ebusuku ngaphandle kwezibane zesitrato. Ukuhamba okude, ukubaleka kunye ne-4WD elunxwemeni, uphonononge iipaki zelizwe ezikufutshane kunye neentaka zebala ezifana ne-cockatoos ezimnyama, kunye nofudo kunye neminenga ngexesha lonyaka.